Ezinye zezifo zamakati kuyinto otodektoz wandile, noma kunjalo - indlebe batshelwa. Isizathu salokhu mkhuba ezingemnandi kuba indlebe izibungu - amagciwane angabonakali ukuthi uhlala indlebe ndima namakati zidla amangqamuzana afile we epidermis.
Ngokuvamile, indlebe izibungu in namakati wadluliselwa ukuxhumana ngqo empilweni isilwane esigulayo, isibonelo, uma intandokazi is zithunyelwa lizwe futhi kuba nabo amakati wasekhaya. Ngaphezu kwalokho, lesi sifo ukusiza futhi lo muntu owayelimele kuwukuziphulula cat, KWAMAGUNDANE, bese, bengazamukeliswanga wageza izandla zakhe, caressed enempilo.
Kubalulekile ungalahlekelwa ekuqaleni isifo, njengoba izibungu indlebe e amakati: kokuqala kwezimpawu ukuze sibonakalise njengoba itchiness - cat is njalo ukunwaya ezindlebeni zakhe futhi unikina ikhanda. Kamuva phezu engaphakathi indlebe kukhona inqwaba soma dark umbala onsundu - iyona imikhiqizo imfucuza izibungu futhi exudate. Ilokhu ecwaninga ezindaweni ezithintekile, ikati kungaba ona them ngalesosikhathi ukuba isithombe esisitholayo namanje enamathiselwe nokuvuvukala, kanye amathuba kanye ubovu khulula.
Ngaphambi kokuba uqale ukwelashwa, kumelwe wenze uphethwe yini. Indlebe izibungu in namakati kungatholakala ngesibona-khulu, okuyinto udinga ukuthatha swab ukotini nokususa kusukela indlebe kanye ngokucophelela ngaphansi kokukhulisa uma kubonakala ezihambayo amachashazi kancane okhanyayo grey-ke, kuyinto amagciwane.
Lapho umkhaza indlebe kutholakala, kubalulekile ukubhekana ngokushesha ukuze vet ezinhle. Into esemqoka - musa ukusebenzisa lesi sifo ukuthi kungaholela yezinkinga ezifana otitis abezindaba, futhi ezimweni ezimbi kakhulu, futhi uthole ulwelwesi avuvukele zobuchopho, okungase kuholele ekufeni.
Uma amagciwane itholwa ngesikhathi, e kusaqalwa zonke izinqubo zokwelapha ngokuvamile kungagcini ekwelapheni izindlebe izidakamizwa ezikhethekile antiparasitic. izindlebe Okokuqala bahlanza of ubomvu kanye soma usebenzisa noma iyiphi isinqandakuvunda, bese wangcwatshwa sokuzwa canal indlebe lehla - cishe 0.3 ml ngayinye indlebe ngayinye. Ubude besikhathi sokwelashwa kunqunywa izincomo ezinikezwe imiyalelo izidakamizwa. Njengomthetho, ngemva kwesikhathi esithile beqeda imfundo ethatha, esesibili, njengoba olwenziwa ngenkuthalo okusakazwa futhi uhluke a ubungqabavu okukhulu. Kakhulu ngempumelelo ngokuhlanganyela amaconsi isinyathelo acaricidal namafutha. Kubalulekile futhi ngesikhathi egula ukulondoloza isimiso somzimba sokuzivikela ikati.
Uma lesi sifo akuniké yezinkinga, ngaleso sikhathi udokotela ekunika imithi elwa namagciwane. Bangase badinge i antihistamine nezidakamizwa analgesic.
Indlebe izibungu in namakati ophilayo hhayi kuphela endlebeni, kungaba ukukhasa nomzimba. Kulokhu, phezu kobuso umzimba kwamagciwane avele amnyama. Badinga ukususa ngokucophelela futhi ugeze kahle leyo ndawo eshile imoto. Kungcono ukulinda okwamanje le ezingemnandi, ageze isilwane esithanda ama-yokuwasha zinambuzane njengoba prophylaxis. Uma uhlala eduze ikati onesifo okunempilo, bese futhi kuyadingeka ukucubungula njengoba ngomnikelo omncane iyathelelwana kakhulu.
Kufanele kugcizelelwe ukuthi izibungu indlebe e amakati - akusiyo sifo kwakumelwe ziphathwe ngokwakho. Noma yimuphi izidakamizwa kungabangela imiphumela emibi, ngakho wona kumngane wakho ezine-ezinemilenze unelungelo lokuthathwa njengomsulwa udokotela. Nokho, uma ufuna ukusebenzisa ngaphezu ukuphathwa ebekiwe ezinye amakhambi emvelo, umonakalo ngeke. Ngokwesibonelo, kuyasiza ukuba asingathe cat ezindlebeni ukumnika tea eluhlaza kuyinto enhle kakhulu isinqandakuvunda zemvelo. Isebenza kahle ngokumelene amakhizane uwoyela alimondi.
Into esemqoka - khumbula ukuthi otodektoz akayona ingozi abantu, ngakho ungesabi ukuxhumana isilwane sakho, ngoba wayengumuntu ngesikhathi lesi sifo usizo oludingayo kakhulu umninikhaya. Ngaphezu kwalokho, uma isilwane isesimeni esihle, ngisho nabo amagciwane, izivikeli mzimba zingakwazi ukubhekana naso. Kule ndaba kubalulekile ukugcina cat ezimweni ezinhle, ukunikeza ke ukudla ukudla okunomsoco, ocebile wonke namavithamini namaminerali. Kubaluleke ngokukhethekile ukuba ulandele izilwane ezisencane kanye ukuguga has, kusukela amasosha omzimba sokuqala isencane isakhasa, kanti eyesibili is isiphela kakade. iqembu Ubungozi sihlanganisa amakati abakhulelwe. Watch out for impilo isilwane sakho, bese kungekho izibungu ngeke ukumlimaza.
Isidlaliso Elisengozini zohlobo inikezwe
Rafting e Losevo - adrenaline ekusakazeni yokufakelwa
Iphethini ukukhilosha isikhafu. Amaphethini hook: isikimu kanye nencazelo
Kuyini ukucwaswa? Ikhona yini indzawo ke ngekhulu xxi?